Child – စာမကျြနှာ 33 – Healthy Life Journal
စူး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ကမ္ဘာပေါ်မှာ အကောင်းဆုံးအစာက ဘာဖြစ်မလဲဆိုတဲ့ မေးခွန်းကို သိလိုကြသူ များစွာရှိမှာပါ။ အဲဒီအဖြေရရှိဖို့အတွက် ယေး-ဂရီဖန်ရောဂါကာကွယ်ရေးစင်တာတည်ထောင်သူ ဒေးဗစ်နဲ့အဖွဲ့ဟာ လေ့လာမှုတစ်ခု ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်နည်းနည်းပါတဲ့ အစာ၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များများပါတဲ့ အစာ၊ သက်သတ်လွတ်အစာနဲ့ ပရိုတင်း (အသား) များများပါတဲ့ အစာတွေကို...
ပါမောက္ခဒေါက်တာ ဥာဏ်ဝင်းကျော် ဦးနှောက်နှင့် စိတ်ကျန်းမာရေး အထူးကုဆရာဝန်ကြီး ပြောကြားသည် “သားရယ် . . ဟန်းဆက်တွေကလည်း သားမှာ ငါးလုံးတောင် ရှိနေပြီလေ၊ ဘာလို့ နောက်တစ်လုံး ထပ်ဝယ်မှာလဲ” “မေမေ မသိပါဘူးဗျာ သားကခေတ် လူငယ်လေ၊ ခေတ်နဲ့ အမီလိုက်နိုင်အောင်...
ဇွန်ခိုင်ဦး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) နည်းပညာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာတဲ့ ဒီနေ့ခေတ်မှာ လက်ကိုင်ဖုန်းတွေ၊ iPad၊ Notepad အစရှိတဲ့ လျှပ်စစ်ပစ္စည်းတွေကို ဆက်သွယ်ရေး၊ လုပ်ငန်းကိစ္စတွေ အပါအ၀င်ဖျော်ဖြေရေးအနေနဲ့လည်း အသုံးပြုသူတွေများလာကြပါတယ်။ ဒီလို ဖျော်ဖြေရေးတွေမှာ ဂိမ်းတွေကလည်း တစ်ခုအပါအ၀င်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဂိမ်းတွေထဲမှာ Super Cell က...
အစာနဲ့ဆေး တလွဲမသုံးမိဖို့ ကျောင်းမှာ ကလေးကော ဆရာကိုပါ အဓိကပညာပေးဖြစ်တယ် . . .
ဒေါက်တာဒေါ်ဇင်ဇင်နွယ် (ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ အစားသောက်နှင့် ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန) မေး။. ဆရာမတို့ FDAအနေနဲ့ ကျောင်းတွေမှာ သွားရောက်ပြီး အစားအသောက်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းဖို့ လိုက်လံ ပညာပေးဟောပြောနေတာ သိရပါတယ်။ အဲဒီအကြောင်းလေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သိပါရစေ။ ဖြေ။. ဆရာမတို့က စားသုံးသူရေးရာဦးစီးဌာနနဲ့ တွဲပြီး ၂၀၁၄ခုနစ်ကတည်းက ကျောင်းတွေမှာ...
စားစရာမဟုတ်ဘဲ စားနေခြင်း (Pica)
ဇွန်ခိုင်ဦး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ကလေးတွေက စားစရာမဟုတ်ဘဲ အညစ်အကြေးတွေ ဒါမှမဟုတ် စက္ကူတွေစားတာကို ဆေးပညာအရ Pica လို့ ခေါ်ပါတယ်။ ဒီလို စားစရာမဟုတ်ဘဲစားတာကို အရွယ်ရောက်သူတွေထက် ကလေးငယ်တွေမှာ ပိုတွေ့ရတတ်ပါတယ်။ အသက် တစ်နှစ်မှခြောက်နှစ်အရွယ် ကလေး ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ ၃၂...
သင့်ကလေး ထက်မြက်အောင်မြင်လာစေရန် ပြုစုပျိုးထောင်ခြင်း၂
ပါမောက္ခဒေါက်တာနီလာကြူ စိတ်ပညာရှင် ပါမောက္ခ၊ဌာနမှူး စိတ်ပညာဌာန၊ရန်ကုန်နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း မေး။ ကလေးတွေ အပြစ်လုပ်တဲ့အခါ ရိုက်ပြီး ဆုံးမသင့်ပါသလား ဆရာမ။ ဒီမေးခွန်းကို မိဘတွေက မကြာခဏ မေးလေ့ရှိပါတယ်။ အဲဒီလိုမေးတဲ့ အခါတိုင်း ရိုက်ပြီး ဆုံးမတာကိုကောင်းတယ်လို့ မပြောပါဘူး။ ကလေး တစ်ယောက်ကို...
သင့်ကလေးကို သင်ပြပေးသင့်သော လက်သန့်စင်စေရန် ဆေးကြောနည်း
လက်တွေဟာ သင့်တစ်ကိုယ်လုံးမှာ အညစ်ပတ်လွယ်ဆုံး အစိတ်အပိုင်းပါ။ အဲဒီညစ်ပတ်နေတဲ့ လက်တွေကတစ်ဆင့် ရောဂါပိုးတွေ ကူးစက်နိုင်ခြေကလည်း သိသိသာသာ မြင့်မားတာကြောင့် ကလေး ငယ်တွေကို ငယ်စဉ်ကတည်းက လက်တွေ သန့်ရှင်းစင်ကြယ်နေအောင် ဆေးကြောတတ်ဖို့ စနစ်တကျ သင်ပေးထားသင့်ပါတယ်။ (၁) လက်ကို စိုစွတ်အောင် အရင်ဆုံး...
ပါမောက္ခဒေါက်တာနီလာကြူ စိတ်ပညာရှင် ပါမောက္ခ၊ဌာနမှူး စိတ်ပညာဌာန၊ရန်ကုန်နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း မေး။ ကလေးတွေကို အလိုလိုက်တဲ့ ပုံစံနဲ့အုပ်ထိန်းတဲ့အခါ ချစ်ခင်မှုရမှာလား၊ဆိုးသွမ်းမှာလား ဆရာမ။ ဖြေ။ ကလေးတွေကို အုပ်ထိန်းရာမှာ မိဘ တွေက အလိုလိုက်တဲ့ ပုံစံနဲ့ အုပ်ထိန်းတဲ့ အခါ ကောင်းတာရော ဆိုးတာရော...